बुधबार घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
बुधबार घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । केही दिन देखी बढीरहेको सुनको मुल्य बुधबार भने गिरावट आएको छ। आज तोलामा एक हजार २०० रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९६ हजार ७००मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी ब्यबसायी महासंघले जनाएको छ ।
अघिल्लो दिन मंगलबार सुन प्रतितोला ९८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज तोलामा ३० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला एक हजार ३६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सोमबार पनि चाँदी आजकै भाउमा कारोबार भएको थियो।
देशका अधिकांश स्थानमा यतिबेला जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सुन चाँदी व्यवसाय ठप्प भएको छ ।